Trazụ ahia Bitcoin Otu esi azụ Bitcoin maka PROFIT na Eprel 2021! - Mụọ ahia 2
Trazụ ahịa Bitcoin - Otu esi azụ ahịa Bitcoin na nyiwe kachasị mma Crypto Trading 2021
N'oge na-adịbeghị anya, Bitcoin - nke izizi ma ọ bụ de-facto cryptocurrency nke ụwa, abụghị ihe ọ bụla karịa mmiri nke onye nrụpụta. Ọganihu ngwa ngwa na 2021 na ego dijitalụ bụ klas akụ dị ijeri ijeri ọtụtụ ijeri.
Ọbụghị naanị na ị nwere ike ịzụta, ree na, azụmaahịa Bitcoin na mgbanwe mgbanwe nke atọ nke atọ, mana akụrụngwa akụrụngwa nwere ahịa azụmaahịa zuru ezu ugbu a.
Rịba ama, ebe ahia Bitcoin na-aghọwanye ewu ewu na ebe nrụọrụ weebụ, ọ ka bụ akụ na ụba na-enweghị atụ. N'ezie, ọ bụghị ihe omimi na cryptocurrency ịgbago ma ọ bụ gbadaa uru site na ihe karịrị 10% n'otu ụbọchị.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị na-achọ ịchọpụta otu ị ga - esi nweta ọrụ itinye ego n'ọrụ gị n'ụkwụ aka nri - hụ na ị gụrụ omimi anyị Ntuziaka ahia ahia Bitcoin. N'ime ya, anyị na-ekpuchi ins na outs nke etu esi azụ ahịa Bitcoin na-arụ ọrụ, kedụ ihe egwu ị kwesịrị ịtụle, otu ị si enweta ego, nyiwe ndị ị kwesịrị ịzụ ahịa na, na ndị ọzọ.
Mara: Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụ Bitcoin n’obere oge wee dị otu a - ịchọrọ nhọrọ nke ịzụrụ na ire na pịa bọtịnụ, ị nwere ike kachasị mma ịzụ ahịa CFDs.
Kedu ihe bụ uru na ọghọm nke azụmaahịa Bitcoin?
Banye ahia ohuru nke ka di na nwata
A na-ere ọtụtụ ijeri pound nke Bitcoin kwa ụbọchị
Ahịa Bitcoin na-emeghe 24/7
Ọtụtụ narị usoro nhazi azụmahịa nke Bitcoin ugbu a n'ahịa
Fọdụ ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere ịzụ ahịa Bitcoin CFDs na enweghị ego
Otu n'ime klaasị kachasị akụ na ụba na ngalaba akụ na ụba
tupu anyị na-abanye n'ime nkọwa nke ịzụ ahịa ego dijitalụ, ka anyị jide n'aka na anyị ghọtara ihe Bitcoin bụ. N’ụdị ya kachasị mkpa, Bitcoin bụ cryptocurrency nke onye nrụpụta a na-amaghị aha ya kere n’afọ 2008. A na-akpọ teknụzụ na-akpata ya ‘ngọngọ’, ọ na-enyekwa ohere ka sistemụ Bitcoin rụọ ọrụ ‘n’ụzọ adịghị mma’.
N'okwu nkịtị, nke a pụtara na ọ nweghị otu onye ma ọ bụ ikike na-achịkwa netwọkụ Bitcoin, ọbụnadị gọọmentị ma ọ bụ ụlọ akụ etiti anaghị akwado ego ahụ n'onwe ya. Kama nke ahụ, ndị 'na-egwuputa' na-akwado ma na-akwado azụmahịa. Onye ọ bụla nwere ike ịghọ onye na-egwuputa Bitcoin ma ọ bụrụhaala na ha nwere ngwaọrụ ngwaike achọrọ.
Na nloghachi maka inye onyinye ọkụ eletrik, a na-eji Bitcoin akwụ ụgwọ ndị na-egwupụta ihe na-aga nke ọma. Bitcoin dị ka ego bụ mebere, nke pụtara na ọ naghị adị n'ụdị anụ ahụ dị ka Pound ma ọ bụ dollar US. Kama nke ahụ, a na-echekwa azụmahịa niile na nnabata akaụntụ na blockcheni - nke na - abụghị naanị na ọ na - agbanwe agbanwe maka iyi egwu ezighi ezi, mana ọ na - eme ka inyefe aha, ngwa ngwa na ọnụ ala dị ọnụ ala.
Site na nke a, isi okwu eji eme ihe n'etiti ruo ugbu a bụ maka usoro ịkọwapụta. Nke a bụ ihe kpatara na ọ bụ ugbu a klas ijeri ijeri akụ klaasị nke nwere ike ịre site na ndị na-ere ahịa na ndị ahịa.
Gịnị bụ Bitcoin Trading?
Ọ bụrụ na akụ bara uru, ọ nwere ike bụrụ na ahịa ahịa dị adị. Ma nke ahụ bụ mmanụ, ọla edo, ọka wit, shuga, ma ọ bụ ọka - ọtụtụ ngwaahịa ndị na-enweta uru nwere ike zụta ma ree ndị ọchụnta ego - na ebumnuche bụ isi ịnweta ego. Echiche a adịghị iche na nke Bitcoin na cryptocurrencies ndị ọzọ.
Dị ka ndị dị otú a, ị nwere ike ugbu a na-azụ BItcoin n'otu ụzọ ahụ ị ga-esi azụ ahịa ọ bụla ọzọ. Na nke ahụ kwuru, ahia Bitcoin dịkwatụ ka azụmaahịa Forex, ebe ị ga-ere Bitcoin megide ego ọzọ. Nke a nwere ike ịbụ ego dị ka GBP, USD, ma ọ bụ EUR, ma ọ bụ megide ego dijitalụ ọzọ dị ka Ethereum na Ripple.
Mara: Ọ bụ ezie na Bitcoin nwere koodu ego 'BTC', ụfọdụ nyiwe jiri 'XBT' kama.
Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu na nke kachasị mmiri mmiri Bitcoin bụ nke US dollar. N'ezie, n'oge edere ntuziaka a - ahịa BTC / USD emewo ka ihe kariri $ 23 ijeri ahia n'ime awa 24. Dị ka ndị dị otú a, ma ị na-achọ ịzụ ahịa pound ole na ole ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ isii - enwere ego zuru ezu iji gbaa gburugburu.
Ka anyi lelee otu uzo ahia Bitcoin nwere ike isi rụọ ọrụ.
Kpebiri ịzụ ahịa Bitcoin megide dollar US, ebe ọ bụ na nke a bụ nnukwu ahịa n'ahịa.
A na-akwụ Bitcoin ugbu a na $ 10,000 - ọ bụ ezie na ọ dị gị ka ọ dị ka ịbawanye na ọnụahịa na obere oge.
Ka o siri dị, ị na-etinye 'ịzụta iwu' na ụzọ BTC / USD na $ 500
N'ime oge 48 na-esote, Bitcoin na-abawanye na $ 12,000 - na-anọchite anya 20% na uru
Dika i tinyere ego $ 500, uru 20% gi ritegoro gi uru nke $ 100
Mara: Ọ bụ ezie na BTC / USD ka akpọrọ na dollar US, onye na-azụ ahịa gị na UK ka nwere ike ịgbanwe uru na ọghọm na Pound Sterling.
Olee otú ahia Bitcoin?
Iji zụta, ree, na ahia Bitcoin - ị ga-eji usoro nke atọ. Dabere n'ụdị ngwongwo ịchọrọ itinye ego na ya, nke a nwere ike ịbụ onye mgbanwe ọkachamara cryptocurrency ma ọ bụ onye na-ere ahịa CFD. N'ụzọ dị oke mkpa, nke a ga-adabere na ma ị na-eme atụmatụ ịzụ ahịa Bitcoin na obere oge /ụbọchị trading ndabere ma ọ bụ jigide ego gị ogologo oge.
Dị ka ndị dị otú a, n'okpuru anyị agbajisị ụzọ ndị na-enye gị ohere itinye aka na Bitcoin Trading.
Dingzụ ahịa Bitcoin Site na 100% Nwe ya
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụ Bitcoin n’ụdị ya nke kachasị, mgbe ahụ ị ga-ebu ụzọ zụta ego dijitalụ. Ọ bụ ezie na anyị ga-akọwa otu nke a si arụ ọrụ nke ọma karịa, ị ga-eji mgbanwe mgbanwe nke atọ nke nwere ikike ịnabata ego ego.
Nke a ga - enyere gị aka iji debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ nyefee ego na bank zụta Bitcoin, nke ị nwere ike were ego ndị ọzọ zụọ ahịa. Ozugbo i nwetara Bitcoin, ị nwere nhọrọ abụọ. Y’oburu n’acho itinye aka na ahia ubochi, mgbe ahu i gha agha ya na ahia ozo di ka Ethereum.
Mara: Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnwe Bitcoin 100% wee were ya zụọ ahịa fiat dị ka dollar US, ikekwe ị ga-eme nke a site na ụzọ BTC / USDT. USDT bu ego nke amara dika Tether nke di na dollar US.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ Bitcoin gị na dollar US, ị nwere ike ịme nke a na mgbanwe mgbanwe cryptocurrency gị. Nhọrọ nke abụọ bụ ịdọrọ Bitcoin gị na obere akpa gị maka nchekwa. Nhọrọ a bụ maka ndị chọrọ itinye ego na Bitcoin na ogologo oge, yana olile anya na n'ọdịnihu ọ ga-abawanye uru karịa.
Bitcoinzụ ahịa Bitcoin CFDs
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-etinye ego n'oge na-achọ ịnweta ohere Bitcoin na ụbọchị azụmaahịa, anyị ga-atụsi ike ịtụle CFDs (nkwekọrịta-maka-ọdịiche). CFDs na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọnụego ọdịnihu nke akụ na-enweghị mkpa ịnwe ma ọ bụ chekwaa ya. Ọ bụghị naanị na CFD dị na mpaghara Bitcoin, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na klas ọ bụla dị adị.
Ma ọ bụ ebuka na mbak, ọla edo, mmanụ, gas nkịtị, ma ọ bụ S&P 500 - CFDs na-enye gị ohere ịzụ ahịa akụ na pịa bọtịnụ. Uru nke ahia Bitcoin site na onye na-ere ahịa CFD bara ụba. Nke mbu, n’adịghị ka mgbanwerịta nke atọ ndị ọzọ cryptocurrency, ụlọ ọrụ na-ere ahịa CFD bụ agha na-achịkwa nke ọma.
Dịka ọmụmaatụ, na UK niile ndị na-ere ahịa CFD ga-enwerịrị ikikere na Njikwa Ọrụ Ego. Nke a na-enye gị ọtụtụ usoro nche nke agaghị adị na ntụgharị cryptocurrency. Nke abuo, nyiwe CFD na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị dịka debit / kaadị akwụmụgwọ, nnyefe ụlọ akụ, na ọbụlagodi e-wallets dị ka PayPal.
Dị ka ndị dị otú a, ọ dịghị mkpa ịzụta n'ezie Bitcoin iji malite ịzụ ya. Kama nke ahụ, ị ​​ga-emepe akaụntụ, debe ego, wee zụta Bitcoin CFD ozugbo. Nke a bara uru ma a bia imechi ahia gị. Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere inyefe uru Bitcoin gi na obere akpa dijital. Kama nke ahụ, nyiwe UK CFD ga-egosipụta nguzozi, uru, na ọghọm na GBP.
Ndị ahịa Bitcoin
Dika ebe itinye ego nke cryptocurrency abanyela na otutu-mgbasa, mgbanwe na ndị na-ere ahịa na-enyezi ngwa ọrụ ego karịa. Nke a gụnyere ahịa ọdịnihu na CME na CBOE - nke bụ abụọ kachasị mgbanwe mgbanwe na ụwa. Site na nke a, mgbe CME na CBOE na-enye ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ ego, ị nwekwara ike ịnweta Bitcoin n'ọdịnihu ahịa dị ka ndị na-azụ ahịa mkpọsa.
Nke a bụ ihe atụ nke otu Bitcoin n'ọdịnihu ahia nwere ike ịpụ.
Ihe Nlereanya nke Bitcoin Futures Trade
Ka anyị kwuo na ị bụ bullish n’ọdịnihu nke Bitcoin. Dịka, ị kpebiri itinye ego na nkwekọrịta Bitcoin ga-eme n'ọdịnihu. Nkwekorita a nwere ọnwa atọ nke njedebe, nke pụtara na a ga-amanye gị ire nkwekọrịta ahụ na, ma ọ bụ tupu, ụbọchị ntozu. Ọnụahịa nke nkwekọrịta Bitcoin bụ $ 8,000.
Na-azụta 2 Bitcoin n'ọdịnihu nkwekọrịta na $ 8,000 ọ bụla.
Ọ bụ ezie na nke a ruru ahịa nke $ 16,000, naanị ị ga-achọ itinye obere aka.
I kpebiri ịhapụ nkwekọrịta ahụ ruo ntozu okè, ebe ọnụahịa Bitcoin na-agbakọ.
Mgbe nkwekọrịta ahụ gwụchara n'ime ọnwa atọ, ọnụahịa Bitcoin bụ $ 10,000.
Nke a pụtara na nkwekọrịta ọ bụla bara uru $ 2,000 karịa ọnụahịa nke ị kwụrụ.
Nwere nkwekọrịta nkwekọrịta 2 n'ọdịnihu, nke pụtara na uru net gị bụ $ 4,000.
N'otu aka ahụ, tinye ma kpọọ nhọrọ eruola ebe ntinye ego Bitcoin. Nke a na - enye gị ohere ịkwụ ụgwọ 'adịchaghị mma' - nke ga - enye gị nhọrọ ahụ, mana ọbụghị ọrụ, ịzụta Bitcoin na ụbọchị ọzọ.
Nke a bụ ihe atụ nke otu esi azụ ahịa nhọrọ Bitcoin nwere ike ịpụ.
Ihe Nlereanya nke ahia Nhọrọ Bitcoin
Ọ bụ ezie na ọ bụghị na-agbasa dị ka ọdịnihu, nhọrọ Bitcoin dị na ọtụtụ nyiwe ahia. Isi echiche bụ na ị na-akwụ ụgwọ ego na Bitcoin iji nweta ahịa nhọrọ. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ọnụ ahịa Bitcoin bara uru na $ 10,000, ọnụ ahịa iku bụ $ 11,000. Onu ahia na nhọrọ oku bu ego 10 na dollar.
Youchọrọ itinye ihe dịka $ 300 ịzụrụ nhọrọ oku Bitcoin
Nke a na-enye gị ohere ịnweta $ 3,000 uru nke Bitcoin. Naanị otu n'ime ihe abụọ nwere ike ime.
Ọ bụrụ na Bitcoin anaghị akụ ụgwọ iku nke $ 11,000 tupu nkwekọrịta ahụ agwụ, ị ga-atụfu ego $ 300 gị.
Ihe nke abuo - nke bu ihe ichoro anya, bu Bitcoin kariri ugwo onu ahia nke $ 11,000.
Ka anyị kwuo na izu abụọ ka e mesịrị, Bitcoin nọ ọdụ na $ 12,000.
'Ve gabigala ụgwọ iku ahụ, yabụ ị kpebiri iwepụ ego gị na uru.
Premiumgwọ ị kwụrụ ugbu a na-enye gị ikike ịzụta Bitcoin, n'agbanyeghị, ị ga-akwụ $ 11,000, ma ọ bụghị uru ahịa dị ugbu a nke $ 12,000.
Ego ahia ahia Bitcoin
Dị ka ọ dị na klaasị ọ bụla ịchọrọ ịzụ ahịa n'ịntanetị, ịkwesịrị ịtụle ụfọdụ gbasara ụgwọ. Nke a nwere ike ịbịa n'ụdị dị iche iche, yabụ gbaa mbọ gụọ isi ihe ndị a.
F Ego Pasent
Ego kachasị ọnụ nke ị ga-ezute mgbe ị na-azụ Bitcoin online bụ nke ego pasent. A na-agbakọ ụgwọ ahụ megide oke nke iwu gị, ị ga-akwụkwa ya ugboro abụọ. Ga-akwụ ụgwọ ya mgbe mbụ ịmalitere azụmahịa ahụ, yana mgbe ị mechiri ya.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ego azụmaahịa ruru 1%. Ọ bụrụ n ’ị ga-azụrụ ihe ruru £ 250, ọ ga-ebu ụzọ kwụọ £ 2.50. Ọ bụrụ na uru nke ego toro ruo £ 400, ma ị kpebiri imechi ahia ahụ iji chọpụta uru ị bara, ị ga-akwụzi £ 4 na ụgwọ.
Lat ụgwọ efu
Bitcoinfọdụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa Bitcoin ga-akwụ gị ụgwọ ego ewepụghị oge ọ bụla ị zụrụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ £ 4.50 maka azụmaahịa ọ bụla. N'agbanyeghị oke nke iwu gị, ị ga-akwụ £ 4.50 mgbe ịzụrụ Bitcoin, na £ 4.50 ọzọ mgbe ị na-ere ya. Usoro ego ewepụghị ego bara uru nye ndị ahụ na-azụ ahịa n'ezie.
Platlọ ọrụ na-enweghị ọrụ
ụfọdụ ahia n'ịntanetị nyiwe ugbu a na-enye gị ohere ịzụta ma ree Bitcoin na ntọala enweghị ọrụ. Nke a pụtara na ị gaghị akwụ ụgwọ azụmaahịa na njedebe ọ bụla ahịa gị, nke dị mma. Agbanyeghị, ndị na - azụ ahịa ọhụụ na - echefukarị gbasara mgbasa a, n’ihi na ọ bụ ụgwọ ị ga - akwụ.
N'agbanyeghị ihe ị na-ere, a ga-enwe mgbasa. Nke a bụ ihe dị iche na ọnụahịa 'zụrụ' nke ngwa ahịa na nke 'ere'. Nwere ike gbakọọ mgbasa na pasent okwu, nke ahụ na-enye gị ihe ngosi doro anya gbasara ego ole ị na-akwụ ụgwọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị kwuo na ọdịiche dị na nzụta na ire ọnụahịa Bitcoin ruru 1.5%. Ọ bụrụ na ịga n'ihu ogologo oge na Bitcoin, ị ga-achọ ọnụahịa ịbawanye ma ọ dịkarịa ala 1.5% naanị iji mebie.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị jụọla ihe kpatara na ị na-acha uhie uhie ozugbo emechara azụmahịa, nke a bụ n'ihi mgbasa!
Y’oburu n’atụmatụ ịzụ ahịa Bitcoin na leverage, mgbe ahụ ị ga-achọkwa ịlele ihe ịkwụ ụgwọ ụgwọ nke ikpo okwu. Nke a na-arụ ọrụ n'ụdị yiri nke mgbazinye ego, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na ị na-agbazi ego akwụ ụgwọ ahụ n'aka onye na-ere ahịa.
Feeskwụ ụgwọ ego ga-adịgasị iche dabere n'ụdị akụ ị na-ere, ọ bụ ezie na n'ihe banyere Bitcoin, ọ ga-adị oke ọnụ.
Ọzọkwa, ụgwọ ego na-adabere na pasent nke ego ị gbaziri. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ 6% karịa afọ, ị ga-akwụ ụgwọ pro-rata maka ụbọchị ọ bụla ị na-eme ka azụmahịa ahụ mepee.
Enwere m ike ahia Bitcoin na leverage?
A ọnụ ọgụgụ nke Bitcoin trading nyiwe ugbu a na-enye gị ohere ahia na leverage. Ego ole ị ga - enweta ga - adabere n'ọtụtụ ihe. Nke mbu, oburu na ikpebie iji ikpo okwu CFD emeputara ka ahia Bitcoin, mgbe ahu ka onye na ere ahia gha agbaso iwu ndi European Securities and Markets Authority (ESMA) weputara.
Nke a na-ekwu na ndị na-etinye ego na-ere ahịa na-etinye aka na ntanetị nke naanị 2: 1 mgbe ha na-azụ Bitcoin na cryptocurrencies ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere nghọta siri ike banyere ihe egwu dị na ya, yana ị na-achọ itinye ihe nrịgo dị elu dị elu, ịnwere ike iji usoro ikpo okwu crypto-derivative.
Mara: Dị ka ọnwụnwa dị ka leverage nwere ike ịbụ, ị nwere ike ịfu nnukwu ego ma ọ bụrụ na azụmaahịa gị ga-emegide gị. N'ezie, ị ga-atụfu oke osisi gị ma ọ bụrụ na azụmaahịa gị na-agba mmiri, ya mere jiri nwayọ kpachara anya.
Platformsdị nyiwe ndị ahụ na-eme naanị na nkwụnye ego na iwepụ na cryptocurrency, nke pụtara na a chọghị ha iru otu iwu ahụ dị ka ndị na-ere ahịa fiat. Dị ka ndị dị otú a, ị nwere ike ịzụ ahịa Bitcoin site na iji ihe ruru 100: 1.
Kedu otu esi ahota ihe ngosi ahia ahia?
Ọ bụrụ na ị gụọla ntuziaka anyị ruo ugbu a, enwere olile anya na ị ghọtara ugbu a ihe ahịa Bitcoin bụ. Ọ bụrụ na ị nọ ugbu a na ọkwa ebe ịchọrọ ịmalite ọrụ ịzụ ahịa Bitcoin gị, ị ga-ahọrọ otu ikpo okwu.
Site na ọtụtụ narị mgbanwe na ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ ugbu a n'ahịa, ịmara ebe ikpo okwu ha ga-eso adịghị mfe. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ka ị nyochaa njirisi ndị a tupu imepe akaụntụ ọhụrụ.
Iwu CFD Broker ma ọ bụ Cryptocurrency Exchange?
Nke mbu, ikwesiri ikpebi ma ichoro irite uru na Bitcoin CFDs, ma obu na ichoro inweta Bitcoin ma jiri ahia ndi ozo zụọ ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ CFDs, ị ga-eji onye na-ere ahịa CFD achịkwa nke ikikere nke Financial Conduct Authority (FCA) nwere ikike.
N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụ naanị ole na ole mgbanwe cryptocurrency na-ejide ikikere usoro, ọkachasị na UK. Ka o sina dị, nke a bụ ihe ize ndụ ị ga-ewere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa Bitcoin n'ụdị ya kachasị mma.
Ikwesiri iche echiche banyere ego. Dịka ọmụmaatụ, olee otu i bu n'obi isi tinye ego na akaụntụ azụmaahịa gị? Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji kaadị akwụmụgwọ / debit kwa ụbọchị, nnyefe ụlọ akụ, ma ọ bụ -e-obere akpa, nhọrọ kachasị mma ị ga - abụ bụ CFD broker. Nke a na-achịkwa ndị na-ere ahịa nwere ikike iwu kwadoro iji kwado ego ego.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ mgbanwe mgbanwe crypto na-enye gị ohere itinye ego na akaụntụ akụ. Feesgwọ ndị ahụ na-adịkarị ntakịrị, ọ bụ ezie na ị ga-echere ụbọchị ole na ole ka ego wee kpochapụ.
Ga-akwụ ụgwọ ụgwọ azụmaahịa mgbe ịzụrụ na ire Bitcoin na ntanetị - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọrọ maka onye na-akwụ ụgwọ ọrụ na-enweghị ọrụ. Na nke ahụ kwuru, ị ga-ahọrọ ikpo okwu nke na-enye usoro nhazi ọnụahịa iji kwekọọ na ihe ị chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na ị na-ere nnukwu akwụkwọ, ị ga-akachasị mma iji onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ụgwọ ego.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa ọhụụ na-achọ itinye obere ego, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-aka mma maka ego pasent na-agbanwe. Uzo obula, echefula banyere mgbasa!
🥇 Ọnụ ọgụgụ Bitcoin ụzọ abụọ
Dika ị gha ere ahia Bitcoin megide ego ozo, ikwesiri inyocha uzo ahia ahia nke onye ahia ahia na enye onyinye. Dịka ọmụmaatụ, ị na-achọ ịzụ ahịa Bitcoin megide ego ego ndị ọzọ dị ka USD na GBP?
N'aka ozo, ị na-eme atụmatụ ahia Bitcoin megide ego dijitalụ ndị ọzọ dị ka Ethereum? N’uzo di nkpa, nyochaa uzo ahia tupu ibanye.
Ndị ahịa na-aga nke ọma ga-eji ngwa nyocha nyocha. Agbanyeghi na ị leba ha anya na mbụ, ha nwere ike ịpụta ka ihe adịghị mgbagwoju anya, ọ dị mkpa ka ị ghọta etu ụdị ngwa ngwa si gbasa ngwa ahịa na ngwa ọrụ Fibonacci na-arụ ọrụ.
Ngwa ndị dị otú a na-enye gị ohere nyochaa usoro ọnụahịa akụkọ ihe mere eme n'ụzọ miri emi, yabụ anyị na-ahọrọ nyiwe azụmaahịa na-enye ọtụtụ akara ngosi eserese.
Ọ dịkwa mma ma ọ bụrụ na usoro ịzụ ahịa Bitcoin na-enye ngwaọrụ nyocha ọhụụ. Ma ọ dịkarịa ala, nke a kwesịrị ịgụnye akụkọ akụkọ dị mkpa nke nwere ike inwe mmetụta kpọmkwem na ọnụahịa Bitcoin.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe Securities and Exchange Commission (SEC) jụrụ Bitcoin a ma ama ETF ngwa n'afọ gara aga, ahịa ahụ zara ozugbo site na ịme nnukwu ire ere. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-achọ usoro ikpo okwu na-enye gị ohere ịnweta oge dị mkpa.
Ebe nrụọrụ ahia ahia Bitcoin kacha mma na nyiwe nke 2021
Amachaghị nke bụ usoro azụmaahịa Bitcoin ị ga-eso? Ọ bụ ezie na anyị ka ga-atụ aro ka ị rụọ ọrụ nke gị na ikpo okwu tupu ị debanye aha, n'okpuru ebe anyị depụtara nhọrọ atọ kachasị elu nke 2021.
eToro na-eme ka ọnụọgụ anyị bụrụ otu ebe n'ihi na a na-ahazi ikpo okwu maka ndị nwere obere ahụmịhe na oghere azụmaahịa. Nke mbu, usoro ndebanye aha na-ewe ihe na-erughị nkeji 5, ma inwere ike itinye ego na debit / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ nnabata ụlọ akụ. Naanị ezigbo cryptos dị maka ndị ọrụ US.
Kedu ihe m nwere ike ịzụ Bitcoin?
Bitcoin nwere ike gbanwere megide ego ego abụọ (dị ka USD na GBP) na cryptocurrencies ndị ọzọ (dị ka Ethereum na Ripple).
Ebu ahia ahia Bitcoin bu ihe?
Dika klas nke ijeri ijeri, o ga-abughi oke ego iji muta na i nwere ike itinye aka na ahia ahia Bitcoin. Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa CFD achịkwa nke FCA nyere ikikere, ị ga-enwe ike ị nweta naanị 2: 1. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji ikpo okwu crypto-derivative, ị nwere ike nweta ikike nke ruru 100: 1.
Kedu ego nkwụnye ego pere mpe na saịtị azụmaahịa Bitcoin?
Obere nkwụnye ego ka a na-ekwu site na saịtị azụmaahịa dị na ajụjụ. Ọ bụrụ na itinye ego na Bitcoin, ọ naghị enwekarị ego nkwụnye ego. N'akụkụ tụgharịa, ndị na-ere ahịa CFD na-achọkarị nkwụnye ego opekata mpe nke £ 100.
Onye na-ahazi saịtị azụmahịa Bitcoin na UK?
Ndị na-ahụ maka njikwa ego na-ahụ maka ndị na-ere ahịa CFD na UK. Agbanyeghị, anaghị achịkwa mgbanwe mgbanwe cryptocurrency na UK, yabụ buru nke a n'uche ..
Enwere m ike ahia Bitcoin 24/7?
N'adịghị ka mgbanwe ngwaahịa ọdịnala dịka NYSE na LSE, Bitcoin nwere ike ịzụ na 24/7 ndabere. Otú ọ dị, mpịakọta ahịa dị nnọọ ala karịa ngwụsị izu, yabụ na-atụ anya ọkwa dị elu.
Gịnị bụ Bitcoin CFD?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịnweta ebe ahia azụmahịa Bitcoin na obere oge, na-ekwu okwu, CFDs bụ nhọrọ magburu onwe ya. Ọbụghị naanị na ụgwọ anaghị akwụ ụgwọ, mana ị nwere ike ịpụ na azụmaahịa gị na pịa bọtịnụ. Ọzọkwa, a na-achịkwa ndị na-ere ahịa CFD.
Enwere m ike ịkpụnye Bitcoin ??
Easiestzọ kachasị mfe iji mee Bitcoin dị mkpụmkpụ bụ ire CFD. Mgbe ịchọrọ ịpụ ahia gị, ị zụrụ CFD azụ. Dị ka ndị dị otú a, usoro ahia ahụ bụ otu ihe ahụ dịka ịga ogologo oge, agbanyeghị, na ntụgharị.